QM oo markale ku baaqday in laga heshiiyo doorashada Soomaaliya. | Banaadir Times
HomeUncategorisedQM oo markale ku baaqday in laga heshiiyo doorashada Soomaaliya.
Soomaalidu waxay waddo dheer u soo mareen xasilinta dalka iyo u dhigista dhabbaha nabad waarta iyo dimuqraadiyad Doorashooyin loo dhan yahay waa lama huraan. Waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaalida inay dib u bilaabaan wadahadalka waxaanan ku celinayaa taageerada buuxda ayay tiri” Rosemary A. DiCarlo.
Previous articleKenya oo aqbashay ka qeyb-galka dhageysiga dacwadda Badda
Next articleDowladda oo ka hadashay dagaalka Dalka jirka Dahsoon